12 Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile | Chekwa ụgbọ oloko
Ụlọ > Njem Europe > 12 Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile
(Emelitere ikpeazụ On: 25/02/2022)
Ọ bụrụ na nkume ụlọ nsọ ochie nwere ike ikwu okwu, ha ga-ekwu maka mmepeanya oge ochie, mbuso agha, ọdịbendị, na ịhụnanya. Nke 12 Ọtụtụ ụlọ arụsị ochie n'ụwa niile ka echekwara nke ọma ma mara mma na ọmarịcha ihe oyiyi. Site na ụlọ arụsị Fero dị n'Ijipt ruo na Buddhist na ụlọ arụsị Hindu na South-East Asia, Ụlọ arụsị ochie ndị a bụ ihe bara nnukwu uru akụkọ ihe mere eme.
1. Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile: Obí nke Knossos
Ebe ofufe na etiti ndụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'oge Bronze, Obí Knossos bụ otu n'ime ụlọ arụsị ochie kacha ochie n'ụwa niile. Temple Knossos bụ ebe etiti mmepeanya Minoan na Krit. Ọzọkwa, ụlọ nsọ oge ochie bụ otu n'ime ụlọ arụsị kacha ewu ewu n'ụwa.
Ewubere ụlọ nsọ Knossos nke mbụ na 1900 BC n'elu ugwu, ma otu n’ime ọtụtụ ala ọmajiji ndị dị na Krit bibiri ya. Otú ọ dị, ozugbo nke ahụ gasịrị, e wuru ụlọ nsọ ọzọ ma bibie n'ime mgbawa ugwu mgbawa. N'ihi ya, ụlọ nsọ Knossos nke guzo taa bụ 3Rd temple si 1375 BC. Ụlọ nsọ Knossos bụ otu n'ime ha ebe geeks akụkọ kacha elu ya na akụkọ ifo ya na relics.
Na-ebupụta Stonehenge site na 6,000 afọ, A kwenyere na nkume Gobekli dị na ndịda ọwụwa anyanwụ Turkey bụ ihe ndị e ji arụ ọrụ nke ụlọ nsọ mbụ n'ụwa. Nke 11,000 Nkume Gobekli Tepe dị afọ bụ ebe ofufe n'elu ugwu.
Otú ọ dị, Onweghi ihe nchoputa nke ebe mmadu bi na mpaghara, mana ebe ahụ bụ isi ihe na njem nke ọtụtụ ndị na-achụ nta na ndị na-achịkọta ihe. Ya mere, ụlọ nsọ Gobekli Tepe jere ozi dị ka ebe nsọ, nwere mkpa okpukperechi.
3. Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile: Hagar Qim
Ejiri a 20 ụda megalith nkume na etiti, Tempụl Hagar Qim bụ otu n'ime ụlọ arụsị kacha mma n'ụwa niile. N'ihi ya, Hagar Qim bụkwa ụlọ nsọ a na-ahụkarị site na oge ochie nke Maltese.
Otu n'ime ihe pụrụ iche na ụlọ nsọ Hagar Qim bụ oghere elliptical n'otu n'ime ụlọ abụọ ahụ.. N'ụbọchị mbụ nke okpomọkụ, Ụzarị anyanwụ na-agafe n'olulu a ma na-amụnye ihe mgbochi nkume. Ị nwere ike ịga na Hagar Qim na njem gị na Malta, ma nwee mmasị na otu n'ime ha 12 ọtụtụ ụlọ arụsị ochie n'ụwa.
4. Ụlọ Nsọ Ochie n'ụwa nile: Temple nke Seti
Echekwara nke ọma, Ụlọ-nsọ ​​nke Seti sitere na usoro ọmụmụ nke iri na itoolu. Templelọ nsọ Seti bụ okike nke Seti na nwa ya nwoke Ramses II. Nna malitere okike, ebe nwa-nwoke ahu mezuru ihe-ichọ-nma na ogige di ya buruburu.
taa, ị nwere ike ịga na Temple nke Seti, na a ụbọchị njem si Cairo. Mgbe ebe ahụ, ị ​​kwesịrị ịṅa ntị na ihe odide Abydos na mgbidi ụlọ nsọ.
5. Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile: Ụlọ nsọ Hypogeum
Ụlọ nsọ kacha ochie n'okpuru ala n'ụwa bụ ụlọ nsọ Hypogeum kacha echekwabara nke ọma na Malta. Ụlọ nsọ ahụ dị ịrịba ama bụ 6,000 afọ, 3 etoju ụlọ nsọ ochie nke ọnụ ụlọ jikọtara ọnụ.
Templelọ nsọ Hypogeum bụ ebe ofufe na ekpere nke mbụ, ma emesịa ụlọ nsọ ochie ahụ ghọrọ ebe a na-eli ozu. Ndị ọbịa nwere ike ịmasị ihe osise na-acha uhie uhie na mgbidi, naanị ihe osise tupu akụkọ ihe mere eme na agwaetiti Maltese. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịhụ ihe ndị pụrụ iche a na-ahụ n'ụlọ nsọ dị na Valletta Museum.
6. Ụlọ nsọ Luxor
Ka ị na-aga n'ọnụ ụlọ nke ụlọ nsọ Luxor, ị na-aga azụ ọtụtụ narị afọ nke akụkọ ihe mere eme. Nzọụkwụ ọ bụla na-eduga gị azụ n'afọ nke Ramses II, na ndụ okpukpere chi nke Ijipt oge ochie.
Templelọ nsọ Luxor nwere nnukwu mkpa na okpukperechi Ijipt oge ochie. Ọzọkwa, ọ bụ n’ụlọ nsọ Luxor ka Chineke Amọn nwere amụghachi n’oge ochichi nke Fero kwa afọ..
7. Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile: Stonehenge
Nnukwu okirikiri nkume bụ otu n'ime ihe omimi kasị ukwuu n'ụwa. Stonehenge kwụ ọtọ na Wiltshire, England. Ọ na-adọta ọtụtụ narị ndị ọbịa ka ha nwee mmasị na ya. Ndị ọkachamara na akụkọ ihe mere eme na ụwa nkà mmụta ihe ochie kwenyere na ndị druids wuru Stonehenge.
Stonehenge gaara enwe ebumnuche okpukpe n'oge ochie. Otu n'ime ihe ịrịba ama bụ nhazi nke nkume na eziokwu ahụ bụ na ihe ncheta ahụ chere ihu n'ọwụwa anyanwụ. Ọ bụ ezie na amabeghị ka esi ebute nnukwu nkume ndị a n'ebe a kpọmkwem na England, Stonehenge bụ otu n'ime ụlọ arụsị kacha ewu ewu n'ụwa niile.
8. Ụlọ nsọ Ggantija
Ggantija oge ochie na Malta pụtara n'etiti 12 ọtụtụ ụlọ arụsị ochie n'ụwa niile. Nke a bụ ekele n'ihi na ọ bụ ihe mgbagwoju anya nke ụlọ nsọ abụọ. Ọzọkwa, Gantija Ụlọ arụsị ahụ nwetara aha ha n'ihi nnukwu nkume ndị e wuru.
Ọzọkwa, na mgbakwunye na ịga leta otu n'ime ụlọ nsọ kachasị ukwuu n'ụwa niile, ị nwere ike na-aga site na ihe ncheta nkume kacha ochie n'ụwa.
9. Ụlọ Nsọ Ochie n'ụwa nile: Temple nke Amada
A ma ụlọ arụsị ndị Ijipt ama ama n'ụwa niile n'ihi oke ha mara mma, na imewe. A maara ụlọ arụsị ndị dị n'Ijipt dị ka ụlọ nsọ kachasị mma n'ụwa nile. Daalụ maka hieroglyphs na ihe osise na mgbidi, Temple nke Amada abụghị ihe dị iche na ịma mma.
Nke obere, ma ọmarịcha ụlọ nsọ Amada nwere ọmarịcha ihe osise na mgbidi. Ihe odide ndị ahụ na-ekekọrịta ihe omume dị ịrịba ama na akụkọ ihe mere eme nke Ijipt dị ka mbuso agha ndị Libya wakporo Ijipt. Ya mere, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga leta ụlọ nsọ kacha ochie nke Ọdọ Nasser, bukota akpa gi gaba nubia.
10. Ụlọ nsọ Mundeshwari Devi, Bihar
Ụlọ nsọ Hindu kacha arụ ọrụ n'ụwa, ụlọ nsọ Mundeshwari dị na Kaimur. Obere, ma na-adọrọ adọrọ na ihe osise nkume, Ụlọ nsọ bụ akara nke Onyenwe anyị Shiva na Shakti. Ndị ọbịa na Temple Mundeshwari nwere ike ịmasị ihe osise ndị na-adọrọ mmasị sitere na oge Gupta na ndụ laa azụ. 625 BC.
Tempụl mara mma dị na ugwu Mundeshwari, ebe a chọtara ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ịrịba ama. Ọ bụrụ na ọ masịrị gị na akụkọ ihe mere eme nke Hindu, ị kwesịrị ịga na Temple Mundeshwari. Ị ga-achọpụtakwu banyere ihe nnọchianya nke Lord Shiva na Shakti na-ebikọ ọnụ n'otu ebe pụrụ iche.
11. Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile: Borobudur Indonesia
Temple Borobudur dị na Indonesia bụ onye ama ama maka ịbụ ụlọ nsọ Buddhist kasị ukwuu n'ụwa. Taa, ọtụtụ ndị Buddha na-eleta ụlọ nsọ Borobudur na njem njem n'àgwàetiti Java.
Mgbe ị gara ụlọ nsọ Borobudur, ọ ga-eju gị anya ịhụ ya 56,000 cubic mita nke isi awọ mgbawa ugwu na-etolite a Buddhist temple.
12. Ụlọ nsọ Hatshepsut
Nsọ nke Nsọ, Ụlọ nsọ Hatshepsut sitere na narị afọ nke 18. Fero Hatshepsut wuru ụlọ nsọ ahụ ka ọ bụrụ ọnụ ọnụ ọnụ ọnụ ugwu Deir El-Bahri, ya mere ihu ụlọ nsọ ahụ megide ọnụ ọnụ ugwu’ Okirikiri ala bụ otu n'ime ihe kacha mara mma n'ụwa niile.
Ụlọ nsọ ochie ahụ sitere n'oge Alaeze Ọhụrụ, ma n’ime afọ ndị gafeworonụ, temple ahụ gbanwere ebumnobi ya site n’ụlọ nsọ gaa n’ebe obibi ndị mọnk. Deir El-Bahri pụtara “Ebe obibi ndị mọnk Northern”, ma e nwere ọbụna ụlọ ekpere n’ime ogige ụlọ nsọ Hatshepsut.
Anyị na Chekwa ụgbọ oloko ga -enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem ndị a 12 Ụlọ nsọ Kasị ochie n'ụwa niile.
Ịchọrọ itinye blọọgụ anyị “12 Templelọ Nsọ Ochie n'ụwa niile” na saịtị gị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fmost-ancient-temples-worldwide%2F - (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Inside ị anyị njikọ maka English ọdịda ibe, ma anyị nwekwara https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, ma ị nwere ike ịgbanwe /fr ka ọ bụrụ /pl ma ọ bụ /de na asụsụ ndị ọzọ.
Ancient	Ụlọ nsọ ochie	mostancienttemplesworldwide	Oldesttepmplesworldwide	Temples
Zọ njem Sweden, Njem Europe
Inzọ Njem Germany, Ụgbọ oloko njem Holland, Njem Europe